>Daw Suu ‘not in good health’
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနေမိသားစုဆရာဝန်လည်း အဖမ်းခံရAFP သတင်းဌာန မေ ၉၊ ၂၀၀၉ မြန်မာအတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနေသည်၊ အစာ စားနိုင်ခြင်း မရှိ၊ သွေးပေါင်ချိန် ကျပြီး ရေဓာတ် ခမ်းခြောက်နေသည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက AFP ကို ယနေ့ ပြောသည်။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဒေါ်စု မိသားစုဆရာဝန်၏ လက်ထောက်ဖြစ်သူ ယမန်နေ့က ဒေါ်စုထံ သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆေးသွင်းပြီး ကုသပေးခဲ့ကြောင်း ရှင်းပြသည်။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နေမကောင်းဘူး၊ အစာ မစားနိုင်ဘူး၊ သွေးပေါင်ချိန်လည်း ကျတယ်၊ ရေဓာတ်လည်း ခမ်းနေတယ်လို့ ဆရာဝန်ရဲ့ လက်ထောက်က ပြောတယ်” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပြသည်။...
>Wunna Ko Ko – World First Computer Software in Burmese Language
> ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး တရားဝင် ဗမာလို ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲ ထွက်ပြီ ဝဏ္ဏကိုကို မေ ၈၊ ၂၀၀၉ အိုးပင်းအော့ဖ်ဖစ် ၃.၁ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်နေ့မှာ အများပြည်သူတို့ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း တရားဝင် ကြေညာလိုက်ရာ၊ လွတ်လပ်စွာ အခမဲ့သုံးနိုင်သော ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး ရုံးသုံးစရာအစုံအလင်ပါတဲ့ ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲတခုမှာ ဗမာစာ လက္ခဏာများ စတင်ပါဝင် လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ဆော့ဖ်ဝဲဟာ ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး တရားဝင် ဗမာလိုကွန်ပျုတာ ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာစာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရုံးသုံးဘာသာစကား တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ လူဦးရေ သန်း ၃၀ ကျော်ဟာ မိခင်ဘာသာ စကားအဖြစ်သုံးစွဲ ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို မှီတင်းနေ့ထိုင်သူတွေ...
> မိသားစုဆရာဝန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ယနေ့ သွားရောက်ခွင့်ရမိုးမခအထောက်တော် ဝဝ၄မေ ၈၊ ၂ဝဝ၉ ဒေါ်စု၏ မိသားစု ဆရာဝန် ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း အထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ မိသားစုဆရာဝန်က ယနေ့ သွားရောက်ခွင့် ရသည်ဟု အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်က ဘီဘီစီ သတင်းဌာနကို ပြောပြခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်တို့က ဒေါ်စုကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှစတင်၍ လစဉ် ပထမဦးဆုံး ကြာသပတေးနေ့များတွင် ဆရာဝန် ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း နှင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယမန်နေ့က ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရမည့်နေ့ ဖြစ်သော်လည်း ဆရာဝန် သွားရောက်ခွင့် မရခဲ့ပေ။ ဒေါ်စုအိမ်အတွင်း လူတဦး ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု ဖြစ်ပွားသည့် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းအရာများကြောင့် လုံခြုံရေး ပိုမို တင်းကြပ်ထားသည်ဟုလည်း ရန်ကုန်မှ...
>SPDC ignores US request to see detained citizen
> အဖမ်းခံရသူနှင့် တွေ့ခွင့်ရရန် အမေရိကန်သံရုံး တောင်းဆို၊ စစ်အစိုးရက အကြောင်းမပြန်သေးAP သတင်းဌာနမေ ၈၊ ၂၀၀၉ ယမန်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အနီးတွင် ကင်းလှည့်နေသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ (ဓာတ်ပုံ – AP) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်မှ အပြန်တွင် အဖမ်းခံရသည်ဟု ဆိုသော အမေရိကန် နိုင်ငံသားနှင့် တွေ့ခွင့်ရရရေးအတွက် အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း အာဏာပိုင်တို့က ဂရုစိုက်ခြင်းမရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန် သံရုံးက ယနေ့ ပြောလိုက်သည်။ အစိုးရ သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည့် John Willian Yeattaw ဆိုသူ၏ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး သံရုံးက အတည်မပြုနိုင်သေးဟု ဆိုသည်။ “ကျနော်တို့ သူနဲ့တွေ့ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုပြီးပြီ၊ ခုထိတော့ တွေ့ခွင့် မရသေးပါဘူး”...
> သာလာယံရုံးခန်းစနစ် မြန်မာလို ရနိုင်ပြီ ၀က်မာစတာ သာဂိ မေ ၈၊ ၂၀၀၉ အိုပင်းအော့ဖစ်လို့ ခေါ်တဲ့ အခမဲ့ ရုံးသုံးထောက်ကူ ကွန်ပျူတာစနစ် အသစ်တခု ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဈေးကွက်မှာ အဖိုးအခပေး ၀ယ်သုံးရတဲ့ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ အော့ဖစ်ဆော့ဝဲကို ပုခုံးချင်းယှဉ်ပြီး ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ အခမဲ့အော့ဖစ်ဆော့ဝဲပေါ့ခင်ဗျား။ အခု သူ့စနစ်အဆင့်က သုံး ဒဿမ တစ် လို့ ကြေငြာချက်ထဲမှာ ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ကွန်ပျူတာနည်းပညာနယ်ပယ်မှာ နေရာတကာ အဖိုးအခပေးမှ အလုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာဆိုတော့ အခုလို အလကား အသုံးချစနစ်တွေ ပေါ်လာတော့ သုံးစွဲမယ့်သူတွေက သို့လော သို့လော ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ အလကားသုံးရတာ တန်ပ့ါမလားပေါ့လေ။ အဲပြီးတော့ အဲဒီက မြန်မာစာဘာသာစကားစနစ်ကလည်း တခါတည်းပူးတွဲပါလာပြီဆိုတော့ မျက်လုံးတွေတောင်...
>One Year Before and After Nargis – comparing photos in the Delta
> နာဂစ်အပြီး ၁ ပတ် နဲ့ ၁ နှစ်အကြာ ကွမ်းခြံကုန်းမြင်ကွင်း ဓါတ်ပုံသတင်း – ၀င်းမြတ် မေ ၈၊ ၂၀၀၉ နာဂစ်ဖြစ်ပွားပြီး တပတ်အကြာ နှင့် တနှစ်အကြာ ကွမ်းခြံကုန်း – နာဂစ်ဖြစ်ပြီး တနှစ်အကြာတွင် တွေ့မြင်ရသည့် မြင်ကွင်းများအရ နဂို အိမ်ယာ၊ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းအခြေအနေ ပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့ နောက်နှစ်နှင့် ချီကြာမြင့်ဦးမည့် အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်လျက်ရှိသည်။ နာဂစ် ဖြစ်ပြီးနောက် တပ်မ (၇၇) ကကွပ်ကဲရေး စခန်းပြုလုပ်ထားသည့် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့လယ် ခန်းမ ထိုခန်းမကို တစ်နှစ် အကြာတွေ့မြင်ရပုံ နာဂစ်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးနေသည့် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ အထက်တန်းကျောင်း တနှစ်အကြာ တွေ့ရသည့် အဆိုပါ ပြင်ဆင်ပြီးသည့် အထက်တန်းကျောင်း သို့သော်...
> Cartoon Maung Yit – Let’s All Our Burmese Swim !!! Or Else, Someone “else” will “Get” Daw Aung San Suu Kyi May 7, 2009 No tags for this post. Related posts No related posts.
>Family doctor can’t reach Daw Suu
> ဒေါ်စုထံသို့ ဆရာဝန် သွားခွင့်မရမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၆မေ ၇၊ ၂၀၀၉ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးရန် မိသားစု ဆရာဝန်က ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဒေါ်စု၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း အာဏာပိုင်တို့က ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်တို့နှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရပ်ကွက်များကို ကိုးကားပြီး AFP သတင်းဌာနက ရေးသားထားသည်။ ဆရာဝန်သည် ဒေါ်စု၏ အိမ်အနီးတွင် နာရီအတော်ကြာ စောင့်ဆိုင်းခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ၀င်ခွင့် ပိတ်ခံရသည်ဟု ဆိုသည်။ ဒေါ်စု၏ ခြံဝင်းအတွင်းသို့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦး မေလ ၃ ရက်နေ့ ညမှ ၅ ရက်နေ့ညအထိ ၀င်ရောက်နေထိုင်ခဲ့သည်ဟု အာဏာပိုင်တို့က ယနေ့ ကြေညာခဲ့သည်။ ဤသို့ ကြေညာပြီးနောက်တွင် ဒေါ်စု၏ ခြံဝင်းအတွင်းသို့ ယနေ့...
>SPDC PM in Putao
> ကလေးချစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကြေးမုံ ဓာတ်ပုံသတင်းမေ ၇၊ ၂၀၀၉ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုမြို့ရှိ ထူးဖောင်ဒေးရှင်း၏ သုတေသနစိုက်ခင်းတွင် ယမန်နေ့က တွေ့ရသော ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်။ ၀န်ကြီးချုပ်၏ ခရီးစဉ်အတွင်း “ထူးထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတေဇက ထူးဖောင်ဒေးရှင်း၏ ပူတာအိုမြို့နယ်တွင် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေ အနေများကို ရှင်းလင်း တင်ပြသည်” ဟု သတင်းစာတွင် ရေးသားထားသည်။ Tags: ကချင် Related posts ရိုးပြေပြစ်အောင် – ၀ရိန်းကောင်းကြသူများ (၀တ္ထုတို) (0) နှလုံးသားတွေလှူတဲ့နေ့ (5) နှင်းဆီ … ရတု (0)...
>swine-flu death toll rises to 44
> တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် ယနေ့အထိ ၄၄ ဦး သေဆုံးReuters ဓာတ်ပုံသတင်းမေ ၇၊ ၂၀၀၉ တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် ယနေ့အထိ ၄၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ (WHO)က ယနေ့ ကြေညာသည်။တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ Harlingen မြို့မှ Judy Trunnell (အသက် ၃၀) ၏ ပုံ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဤအမျိုးသမီးသည် တုပ်ကွေးရောဂါသစ်ကြောင့် ဒုတိယမြောက် သေဆုံးသူဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတလွှားတွင် ရောဂါပိုး ပျံ့လျက်ရှိရာ ကူးစက်ခံရသူ ၆၄၂ ဦး ရှိသည်ဟု ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ဆိုသည်။မက္ကဆီကို နိုင်ငံမြို့တော်မှ ခရီးသည်များအနက် တချို့မှာ မျက်နှာဖုံးစွပ် များ ၀တ်ဆင်ပြီး ရောဂါ ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ဤနိုင်ငံမှ A/H1N1...
>Influenza A(H1N1) – update 19
> A(H1N1) တုပ်ကွေး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် ၁၉ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ (WHO)မေ ၇၊ ၂၀၀၉ မက္ကဆီကို နိုင်ငံမှ အစပြုခဲ့သော A/H1N1 တုပ်ကွေး ရောဂါကြောင့် မက္ကဆီကိုတွင် ၄၂ ဦး၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။နိုင်ငံပေါင်း ၂၃ ခုတွင် A(H1N1) တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်သူ ၂၀၉၉ ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။ မက္ကဆီကို နိုင်ငံတွင် ရောဂါ ကူးစက်သူ ၁၁၁၂ ဦး ရှိပြီး ၄၂ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ၆၄၂ ဦး ရှိပြီး၂ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ အောက်ပါ နိုင်ငံများတွင်...
>Than Shwe reportedly hospitalized